Firefox yakaunza Lockwise yayo password yekushandisa application | Linux Vakapindwa muropa
Munguva pfupi yapfuura Mozilla ingo taura iyo Firefox Lockwise password maneja app Password Manager, iyo yaimboitwa pasi pezita re code Lockbox panguva yekuvandudza kweizvi.
Firefox Lockwise ine kunyorera kweanoshanda masisitimu anoshanda senge Android uye iOS, iyo inokutendera kuti urongere kuwana mapassword akachengetwa muFirefox pane chero mudziyo, pasina kuisa Firefox paari.
Mukushandisa iwe Inotsigira auto-zadza mapassword mune echokwadi mafomu yechero application yeserura kana muminda panodiwa data. Iyo kodhi yeprojekiti Inogoverwa pasi peMPL 2.0 rezinesi.
Lockwise makuru maficha
Pakati pezvakakosha zveFirefox Lockwise tinogona kuwana izvo zvekufananidza password, izvo zvakajairwa maficha eFirefox browser anoshandiswa sehwaro uye kuti mushandisi anodikanwa kuve kana kugadzira account yeFirefox kuitira kuti ruzivo rwako ruwirirane.
Midziyo ine Firfexo Lockwise yakaiswa, zvakabatana neiyo synchronization system nekufananidza nekubatanidza akasiyana zviitiko zvebrowser.
Ndokusaka kuitira kuchengetedza mushandisi data AES-256-GCM block encryption uye iyo PBKDF2 uye HKDF makiyi anoshandiswa pasi pehodhi ine hashing uchishandisa SHA-256.
Nguva yekutamisa kiyi, Onepw protocol inoshandiswa, Inopa mushandisi-parutivi kiyi yekuchengetedza uye inoshandisa yekupedzisira-kusvika-kumagumo kunyorera pasina kuchengetedza dhata kana makiyi akadhirowewa pane yekunze server.
Iyo kiyi yekunyorera yakaiswa zvinoenderana nekutumira uye password yakatsanangurirwa account, account yacho inoshandiswa chete pakuchengeta data rakanyorwa kare mukufamba.
Pamusoro pekushandisa nhare, chirongwa ichi chinogadzira zvakare Firefox Lockwise plugin kuti ishandiswe mubrowser, iyo inopa mushandisi imwe nzira kune iyo interface inosanganiswa muFirefox kubata mapassword akachengetwa.
Kana plugin yaiswa, bhatani rinowoneka pane iyo pani iyo iwe yaunogona nekukurumidza kuona maakaunzi akachengetedzwa kune ino saiti, pamwe nekutsvaga uye kugadzirisa mapassword.
Izvo zvakakosha kuti utaure uye utore kufunga kuti izvozvi, mukwanisi ane hunhu hwekuyedza kukura (alpha vhezheni) uye kusvika zvino haigone kushanda kana tenzi password yakaiswa mubrowser.
Ndicho chikonzero nei vashanduri vachiri kushanda kuisa Firefox Lockwise mukati mekuvandudza kweFirefox kuitira kuti igone kuverengerwa sisitimu yekuwedzera.
Mobile mapurogiramu de firefox lockwise vari mukuedzwa kwe beta, asi kuburitswa kwekutanga kwakatsiga kwakarongerwa svondo rinouya. Mukushandisa, telemetry inotumirwa nekukanganisa neruzivo rwehuwandu nezve hunhu hwekushanda nechishandiso
Panguva ino, iko kugona kwekugadzirisa maakaundi mune mamiriro enzvimbo yepamusoro-nhanho inowedzerwa kune password password Firefox standard, iyo inokutendera iwe kuti upe password yakachengetedzwa kune ese subdomains.
Semuenzaniso, iyo password yakachengetedzwa ye login.example.com ikozvino icha kupihwa auto-kuzadza mafomu esiti pasi peiyo main domain mune iyi kesi semuenzaniso www.example.com. Shanduko iyi ichaverengerwa muFirefox vhezheni 69.
Chekupedzisira, mune inotevera vhezheni yeFirefox 69, yakarongedzwa zvakare kugonesa maitiro ekubata anotungamira maneja, iyo inobvumidza kuchinjiswa kweruzivo nezve maitirwo neicho chakanyanya kukoshesa kuhurongwa hwekushandisa.
Semuenzaniso, zvemukati zvinopa maitiro anotarisira anoshanda tebhu zvinopihwa yakanyanya kukoshesa (zvimwe CPU zviwanikwa zvichagoverwa) pane maitiro anoenderana neashure tabo (kana ivo vasingatambe vhidhiyo uye kurira).
Shanduko yakarongedzerwa kuve inogoneswa nekusarudzika yeWindows papuratifomu chete, kune mamwe masisitimu iyo dom.ipc.processPriorityManager.enabled sarudzo mune nezve-config ichaitwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Firefox yakaunza Lockwise yayo password yekushandisa application
Ini handikwanise kuibvisa, kunyangwe ndanyatsoteedzera iwo akarairwa rairo
uptime, iri nyore kuraira kuti uzive kuti uri kushandisa PC yako kwenguva yakareba sei